पेट्रोल पम्पमा तेल अभाव, चाप कम गर्न सेना तयारी अवस्थामा ! – Online Khabar 24
पेट्रोल पम्पमा तेल अभाव, चाप कम गर्न सेना तयारी अवस्थामा !
ब्रिटेनमा लामो लाइन र तेल अभावका कारण कैयौँ पेट्रोल पम्पहरू बन्द भएसँगै अवस्था सहज बनाउनका लागि सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
सेनाका ट्याङ्कर चालकहरूलाई आवश्यक परेको अवस्थामा परिचालन गर्नका लागि तालिम दिइने सरकारले जनाएको छ।
यूकेका व्यापारमन्त्री क्वासी कोर्टनले यूकेसँग पर्याप्त आपूर्ति रहेको बताउँदै उक्त कदमलाई समझदारी र सा’वधानीको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
मन्त्रीहरूले आवश्यकता नभएका मानिसहरूले समेत तेल खरिद गरेका कारण पम्पहरूमा लाइन देखिएको र ती रित्तिन पुगेको आ’रोप लगाएका छन्। लरी चालकहरूको अभावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित हुनसक्ने आशङ्काका कारण कैयौँ चालकहरू पेट्रोल पम्प पुगेका थिए।
ब्रेक्जिट, को’भिड, ज्यालाको तह र जेष्ठ जनशक्तिजस्ता कारणले लरी चालकहरूको सङ्कट निम्त्याएको छ। ब्रिटेन युरोपेली सङ्घ ईयूबाट बाहिरिएपछि कयौँ युरोपेली चालकहरू आफ्नो देश फर्किएका थिए। थप सीमाको झन्झट र आयमा पर्ने असरका कारण कतिपय अन्यत्र काम गर्न गएका थिए।
Prevपाइलटले भनिरहे– ‘मेरो जहाजको चक्का हेरिदेऊ’ तर ….
nextबिहानै दुखद खबरः ट्रकले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रा गरिरहेका आमा–छोराको मृ’त्यु !